စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလွန်းတာကြောင့် ဆေးကုသရတဲ့အထိ ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဇေရဲထက် – Swel Sone News – NEW VPS
ဇေရဲထက်က စိတ်ဖိစီးမှုများပြီး အိပ်ရေးပျက်လွန်းတာကြောင့် အခုဆိုရင် ဆေးကုသရတဲ့အထိ ကျန်းမာရေး မကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဇေရဲထက် တစ်ယောက် အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်တိုက်လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာ ပင်ပန်းမှုတွေများကြီး ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
‘’အထက်သွေး ၁၁၀,၉၀ Pressure များပြီး Shock ရိုက်သွားခြင်း။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတယ်။ အိပ်ရေးပျက်တာတွေများနေပြီ’’ ဆိုပြီးတော့ မေလ ၉ ရက်နေ့ မနက် ၇ နာရီ ၂၄ မိနစ်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဆေးသွင်းနေတဲ့ ဓာတ်ပုံကိုလည်း တင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဇေရဲထက်ရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ အမြန်ဆုံး ကျန်းမာဖို့အတွက် Comment ကနေတဆင့် ဆုတောင်းပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဇေရဲထက်ဟာ အနုပညာအလုပ်အပေါ် ဝါသနာပါလွန်းသူဖြစ်တာကြောင့် ရန်ကုန်မှာ တစ်ယောက်တည်းနေပြီး အောင်မြင်တဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစုဝင်တွေထဲက မွေးဖွားလာတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်လည်း အခက်အခဲတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။
‘’ကျွန်တော် ရန်ကုန် စရောက်လာကတည်းက မိဘတွေ ထောက်ပံ့ပေးမှု သိပ်မရှိဘူး။ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်စွမ်းလည်း မရှိဘူး။ ကျွန်တော့် မိဘတွေက ချမ်းချမ်းသာသာထဲက မဟုတ်ဘူး။ သာမန်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်တယ်။ အခုဆိုရင် ပိုပြီး မြင့်မားတဲ့ ဘဝကို ရောက်ခဲ့ရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုချိန်ထိ သူများအပေါ် မတရားတာ ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်လှူတယ်။ ကျွေးတယ် အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ပဲ နေခဲ့တယ်” လို့ Duwun Media အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဇေရဲထက် ကိုတော့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် စဖြစ်ကတည်းက ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာလည်း စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ရတာတွေရှိပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြေသိမ့်အားပေး ခဲ့ရတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲရင်း ဆက်လက် ပြောပြလာပါသေးတယ်။
” တခြားမင်းသားတွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေ အကုန်လုံးမှာ အမေက ကာကွယ်ပေးတဲ့လူနဲ့ အဖေက ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့လူနဲ့ အများကြီးတွေ့တယ်ပေါ့။ ကျွန်တော့်မှာကျတော့ နီးနီးကပ်ကပ် ဘယ်သူမှ စောင့်ရှောက်ခွင့်မရှိဘူး။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲ ရုန်းကန်ရတာဆိုတော့ တစ်ခါတလေကျရင် စိတ်ခံစားချက်တွေ များလာတဲ့အခါ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲ နှစ်သိမ့်ရတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ဆို မိဘတွေကို အရမ်းသတိရတယ်” လို့ ဇေရဲထက်က ဖြေဆိုခဲ့တာပါ။
ဇေရဲထက်က အခုဆိုရင် ပြည်သူချစ် သရုပ်ဆောင်. မင်းသား တစ်ယောက်ဖြစ်လို့နေပါပြီ. သူ့ကိုတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား. တီဗီကြော်ငြာတွေကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေ စတင် သိရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. အခုလက်ရှိမှာတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေသာ မက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေလည်း ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးနေရတာ ကို တွေ့ရပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် သူစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်.
ညီလေးမင်းသွေးကို သတိရခြင်းများစွာနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုကို ထုတ်ပြောပြလိုက်တဲ့ နေတိုး
သရုပ်ဆောင်တာ ပီပြင်လွန်းတဲ့ ကျော်ကျော်နဲ့အတူ TikTok ဆော့ကစားခဲ့တဲ့ စိုးပြည့်သဇင်ရဲ့ ဗီဒီယို
ကိုယ်လဲ ဒီနှစ်မကုန်ခင်လေးတော့ sexyဝတ်ပါရစေဆိုတဲ့ မေသစ္စာမောင်ရဲ့ အကြမ်းစားဖက်ရှင်